MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဖွတ်တက်သော တောင်ပို့ အတွင်းမှ ခြကောင်များ (အပိုင်း ၁ +၂)
ဖွတ်တက်သော တောင်ပို့ အတွင်းမှ ခြကောင်များ (အပိုင်း ၁ +၂)
တိုင်းပြည်သည် အဟာရသိဒ္ဒိ အရာရာအားလုံးတို့ဖြင့် စုပုံဖြစ်တည်လာသော တိုင်းပြည်ဟုဆိုပါလျင် မည်သူငြင်းကြမည်နည်း? ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် နှစ်ပေါင်း ရာချီနီးပါး နေလာ ရှိလာခဲ့သော်တောင်မှပင် တိုင်းပြည်ကား စပါးတောင်လိုပုံ စားမကုန်သောက်မကုန် အလျံပယ်ဖြစ်နေသော လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကာလမှာပင် ပွဲလမ်းသဘင် အလှူပွဲများ ကျင်းပမှုများသည် တပြည်လုံး သိမ့်သိမ့်သဲသဲ ကျင်းပနေခဲ့သော သိဒ္ဓိ တောင်ပို့ကြီး ဖြစ်လေ၏။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်က ဆွစ္စလန်နိုင်ငံမှပင် မြန်မာပြည်မှ ပိုလျံ၍ တောင်လိုပုံနေသော ပေါ်ဆန်းမွှေး စပါးတန်ချိန်တသိန်း တိတိအား ကြိုက်ဈေးပြောသလောက်ပေး၍ ၀ယ်ယူ စားသုံးခဲ့ဘူးကြောင်း အထောက်ထားတွေ့ရသည်။ ထိုကြောင့် တိုင်းပြည်၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှာ အံ့မခန်းအောင်ပင် ရှိသည်ဟု အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံများက နုတ်ဖြင့် တဖွဖွ စုပ်သပ်ကာ ရေရွတ်ခဲ့ကြလေသည်။
သို့ရာတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းလိုက်လေသော စစ်တပ် ဖွတ်များက သိဒ္ဓိတောင်ဘို့ကြီးပေါ်သို့ တက်ရောက်မင်းမူကြလေသည်။ သဘာဝတရားအရ စီစစ်စွာ ဆိုရသော် ဖွတ်တို့ နေသော နေရာအတော်တော်များများတွင် ခြကောင်များ ပါ ပူတွဲ နေထိုင်တတ်လေ၏။ ဖွတ်အောင်းသော တောင်ပို့ သည် ခြ ကောင်များပါနေ၍ ဖွတ်၏ ကိုယ်ငွေ့ဖြင့် ခြ ကောင်များအဖို့ မျိုးပေါက်မှု မြန်ဆန်ရပြီး ဖွတ်အဖို့မှာလည်း ချကောင်များအား လိုသလို စားသောက်၍ တောင်ဘို့ အတွင်းဝယ် ကာလကြာရှည် နေထိုင်နိုင်နေလေသည်။
ထိုကြောင့် ဖွတ်နှင့်ခြ သည် တဦးနှင့်တဦး အမှီသဟဲပြုကာ ရှင်သန်နေရသော သတ္တ၀ါဖြစ်လေသည်။
မြန်ပြည်သည်လည်း အုပ်ချုပ်သူ ဖွတ်များနှင့် ၄င်းတို့၏ အကျင့်ပျက် ခြ စားသော ၀န်ထမ်းများ တဦးနှင့်တဦး အမှီသဟဲပြုနေကြပုံများကို တင်ပြပါမည်။
ဖွတ်သက်က အတော်ရှည်လေသည်…ဖွတ်တို့၏ တွားသွားသတ္တ၀ါမျိုးစားထဲတွင် ဖွတ်ကျားက ပို့၍ အသက်ရှည်သည်ဟု ဇီဝဗေဒ ပညာရှင်များက ကောက်ချက်ချလေသည်။ သို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သည်လည်း ဦးနေ၀င်းဖွတ်တက်လာပြီးနောက် န၀တ နအဖ ဖွတ်ကျားများ ဆက်လက် ရှင်သန် အကြမ်းဖက် ကာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း ငြင်းချက် ထုတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဖွတ်တို့၏ ခြ များ အကျင့်ပျက်ပုံမှာ……
၂၀၀၀ ခုနှစ် မေလတွင် ကချင်ပြည်နယ်မှ ရရှိခဲ့သော တန်ပေါင်း ၃၂၁၄ တန်၇ှိသော ကျောင်းစိမ်းတုံးကြီး အကြောင်းနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်နာဝရီလ ၂၉ ၇က်နေ့တွင် ထပ်မံရရှိခဲ့သော တန်ပေါင်း ၁၁၅ တန်၇ှိသော ကျောင်းစိမ်းတုံးကြီးများအား ပထမ ဦးစွာ ဖေါ်ပြလိုသည်။
မေလ ၁၂ ရက် ၂၀၀၀ခုနှစ် တွင် ပတ္တမြားနဂါး နှင့် ကျောက်စိမ်းနဂါး(ဟု အမည်ရသော ပအို့ဝ် ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ခမ်းထီး ဦးဆောင်ကာ နအဖ ဟုခေါ်သော နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးအဖွဲ့ နှင့် အကျိုးတူ ၅၀%၅၀ ရာနုံန်းဖြင့် လက်မှတ်ထိုးကာ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် လက်မှတ်ထိုးကာ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ဒေသတွင် ကျောက်ကွက်လုပ်ကွက်အမှတ်(၁၀၉) နတ်မှောက် ကျောက်ကွက်တွင်းမှ ရရှိခဲ့လေ၏။
ထိုနောက် အဆိုပါ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား တူဖေါ်ဆွဲထုတ်ရန် စက်ကရိယာများအလုံလောက်မ၇ှိသည့်အတွက် တရုတ်ပြည်မှ ၀န်ချီဆွဲနှင့် ဧရာမမြေတူးစက်များအား အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်းဖြင့် ငှားရမ်းတူးဖေါ်စေခဲ့ပြီး အဆိုပါ အရည်သွေး အလွန်ကောင်းမွန်သော တန်ချိန် (၃၀၀၀) ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား မြေပေါ်သို့ အတုံးလိုက် မပျက်မယွင်းစေပဲ ရောက်ရှိလာကာ အလျား အရှည်ပေး (၇၀)ပေ အမြင့် ပေပေါင်း ၂၀ ပေ နှင့် အနံ ၁၆ ပေ ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
ထိုအချိန်က စစ်အစိုးရ၏ အာဏာပိုင် (၃) ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးနှင့် ၊ ထောက်လှမ်းရေး ချုပ် အပြင် နိုင်ငံတော် နအဖ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် တို့ သုံးဦး တို့သည် ဖားကန့်ဒေသရှိ ထောက်လှမ်းရေးအမှတ် နယ်မြေခွဲ (၉)မှ သတင်းပေးပို့ချက်အရ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ပအို့ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ခမ်းထီးအား အမျိုးမျိုး ဖြောင်းဖျ၍ ယခင် သတ်မှတ်ထားသော ၅၀%၅၀ စာချုပ်ဆိုသည့် အကျိုးတူ လုပ်ကိုင် ခံစားခွင့်ဘောင်ကိုကျော်လွန်ကာ အပြီးပိုင် နိုင်ငံတော်သို့လှူတန်းရန် တောင်းဆိုသောကြောင့် ဦးအောင်ခမ်းထီးမှ နိုင်ငံတော် စီးပွါးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် လှူတန်းခဲ့ကြောင်း အောက်ပါ အတိုင်း ပတ္တမြားနဂါး နှင့် ကျောက်စိမ်းနဂါး ကုမ္မဏီမှ မှတ်တမ်းရေးသွင်းလေသည်။
That huge massive jade stone was found lying about 40 feet in the ground. .Now it is being drugged to totally and come into shape to be seen its imperial jade beauty. It can be known as the jade dragon partly because it is the worlds largest jade stone but chiefly its rare find of good quality and weighs over 3000 tons. It is seventy (70) feet long, 20 feet high and 16 feet wide. Its crystal composition is smooth and delicate as it is Jadeite jade. The colour ranges from white to purple, blue and deep green. There's also many dykes very promising to be the precious ones. The Ruby Dragon Jade & Gems Company Welcome heartily to those who proudly want to see the jade Dragon Phakant Region if they haveamind to. You can haveagood choice for any kinds of jade jewellary.
The finding of the great jade was reported to national race leader U Aung Kham Hti and he said it should be owned by the State, that it should be donated to the State and that the State, the whole people and the generations to come should own it as an historic gem. As the State accepted the donation, national race leader U Aung Kham Hti and the national people delightfully donated it to the State, he said. Chairman of PaO National Peace Group U Aung Kham Hti explained purpose of the donation of massive jade dyke.
He said: Head of State Senior General Than Shwe has guided that as our country is rich in natural resources including land and water resources, the nation will develop when all the citizens work hard with goodwill. Secretary-1 Lt-Gen Khin Nyunt also has mentioned that Myanmar is endowed with various kinds of precious stones, Phakant region is well-known for jade mining and it can contribute towards the progress of national economy effectively.
ထိုနောက် ..နအဖ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား မြန်မာပြည်မတွင်းသို့ ယူဆောင်မလာတော့ပဲ တရုတ်ပြည်သို့ တိုက်၇ိုက်ပင် တူးဖေါ်တွေ့ရှိသည့် နေရာမှ မဆိုင်းမတွ သယ်ဆောင်သွားစေလေသည်။
တရုတ်ပြည်မကြီးသို့ အဆိုပါကျောက်စိမ်းလေလံတင်ဈေးကွက်တခုဖြစ်သော ဘရင်ကျုင်း မြို့၊ ကျင်ချိန် ဈေးကွက်တွင် သြဂုတ်လ ရ ရက်နေ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် လေလံတင်ကာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း လေးထောင် နှစ်ရာဖြင့် နောက်ဆုံးဈေးပိတ်သွားစေပြီး ဆော်ဒီအာရေးဗီးယျ နိုင်ငံမှ မင်းသားတဦး၏ ကိုယ်စားလှယ်မှ ၀ယ်ယူကြောင်း သိရသည်။
အမှန်ဆိုရသော် အဆိုပါ ကျောက်စိမ်း တန်ချိန်ပေါင်း (၃၀၀၀) ဆိုသော်လည်း... အရည်သွေး ကောင်မွန်မှုကြောင့် အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (ရှစ်ထောင်) မျှလောက် တန်သည်ဟုပင် ပြောဆိုခဲ့ကြလေသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်က စစ်အစိုးရမှ လူသိမခံလိုသော ဆန္ဒကြောင့် ရသလောက်ဈေးဖြင့် ရောင်းချခဲ့နိုင်ကြောင်း The Economic သတင်းစာက သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဆောင်းပါးရှည်တပုဒ်အနေဖြင့် သုံးသပ် ရေးသားခဲ့ပါသေးသည်။
ထိုကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား ၀ယ်ယူ သယ်ဆောင်သွားသော ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံတွင် မင်းညီမင်းသားများ ၀တ်တက် ဘုရားရှစ်ခိုးရာခန်းမဆောင်တွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြန်လည်ဖြတ်တောက်ကာ လက်ရာမြောက်စွာ အလှဆင်မြန်းထားသော Jeddah မြို့မှ ၀တ်ပြုခန်းမဆောင်သည် အလွန်ပင် နာမည်ကြီးလှလေတော့၏။
သို့ရာတွင် မူးရင် ပထမ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပအို့ဝ် ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ခမ်းထီး၏ နိုင်ငံတော် စီးပွါးရေး နှင့် လူနေမှု့ဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားလာရေးတို့ ပြောက်ကွယ်သွားပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှ မေမြို့နှင့် နေပြည်တော်တွင် နူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖိုတည်ဆောက်ရန် စီမံကိန်းချမှတ်ပြီး အဆိုပါ တန်ချိန် ၃၀၀၀ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ရောင်းချရငွေမှ အမေ၇ိကန်ဒေါ်လော သန်း (၇၀၀) ဖြင့် ကုန်ကျခံကာ တည်ဆောက်မည့် မေမြို့ ဘီအီးအနောက်တွင် ညူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖိုအား ရုရှားနှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ် တွင် စာချုပ် ချုပ်စေခဲ့ပြီး အမေရကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၉၀၀ ဖြင့် ညူကလီးယာ လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် နေပြည်တော် လှိုင်ခေါင်း ဖေါက်လုပ်ရေးအပါဝင် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် လက်ရှိ အနားယူကာ သထုံတွင် ထမင်းဆိုင်ဖွင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေပြီဆိုသော ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင် (နိုင်ငံတော် စာရင်းစစ်ချုပ်) အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှ ခေါ်ယူပြီး ယခု လက်ရှိ နေပြည်တော် ကျောက်မျက်ပြခန်း တည်ဆောက်ပြီးကာလလေးမှာပင် စွန်ပစ်ရန် ပုံထားသော ကမ္ဘာအေး ကျောက်မျက်မှ သယ်ဆောင်လာသည့် ကျောက်ရိုင်းတချို့နှင့် ကျောက်ဖြတ်စွန့် ကျောက်ကာချပ်များအား စနစ်တကျ စုပုံခိုင်းကာ အဆိုပါ ကျောက်အကွဲချမ်းများ၏ အပိုင်းစများသည် တန်ချိန် ၃၀၀၀ ထောင် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးမှ ခွဲဖြတ်လှီးထုတ်ထားကြောင်းနှင့် ဘာအရည်သွေးမှ မရှိပဲ စွန့်ပစ်ကျောက်သား ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင် စာရင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့ရပါသည်။
အပိုင်း (၂) ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှု့ကြပါရန် တောင်းပန်ပါသည်
အပိုင်း(၂)တွင် တန်ပေါင်း ၁၁၅ တန်းကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား လက်ရှိ ဘောလုံး ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော် လုပ်ကွက်မှ ၂၀၁၀ ဇန်နာဝရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွက် ထပ်မံတွေ့ရှိရပြီး မည်သို့ မည်ပုံ ၀ါးစားခဲ့ပုံ ကိုတင်ပြပေးပါအုံးမည်။
ဖွတ်တက်သော တောင်ပို့ အတွင်းမှ ခြ ကောင်များ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ဒေသမှာပင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်နာဝရီလ (7)ရက်နေ့တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး တရားဝင်သတင်းအရ (၂၉)ရက်နေ့မှပင် အတိလင်း ၄င်းဒေသတွင် ထွက်ပေါ်လာလေသည်။ အဆိုပါသတင်း ထွက်ပေါ်လာသော အချိန်ဝယ် တန်ချိန်ပေါင်း ၁၁၅ တန်၇ှိသော စပါကလင်ရောက်တောက်နေသည့် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးမှာ တရုတ်ပြည် မြန်မာ နယ်စပ် ရှိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမိသားစု ပိုင်သော ကျောက်စိမ်း အကြမ်းထည် ဈေးဖြတ်ရောင်းချသော လုပ်ငန်းနှင့် ကျောက်စိမ်း အချောထည် လက်ဝတ်ရတနာများ ပြုလုပ်ကာ ရောက်းချသော ( ရွှေတရုတ် Golden China) ကျောက်စိမ်းကုမ္မဏီ ကွမ်ချုးမြို့သို့ ရောက်ရှိနေလေပြီဖြစ်၏။
အဆိုပါ ၁၁၅ တန် စပါကလင် အစိမ်းရင့်ရောင် တောက်တောက် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား မြန်မာပြည်၏ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ပြုလုပ်ခဲ့သူ ဦးဇော်ဇာ် ပိုင်သော ဖားကန့် လုပ်ကွက်မှ တူးဖေါ်ရရှိခဲ့ပြီး ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား တရုတ်ပြည်သို့ ပို့ဆောင်ရောက်၇ှိစေပြီးမှပင် သတင်းထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ( The Star Daily) မဂ္ဂဇင်းတွင် တိတိပပ ရေးသားထားလေသည်။ တရုတ်ပြည် ကွမ်ချိုးမြို့တမြို့လုံးအစိမ်းရောင် တောက်နေသည်ဟုပင် ပြောဆိုရလောက်သော မြန်မာပြည်မှ ထွက်၇ှိသည့် ကျေက်စိမ်း ပတ္တမြားနှင့် အခြား ကျောက်မျုက်များအား ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ဖြူးရန် လေလံတင်ခြင်း အချောထည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ကျောက်ရာဖြတ်ခြင်း ကျောက်သွေးခြင်း ကျောက်ပန်းချီ အနုလက်ရာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများဖြစ် တည်ရှိနေသော မြို့ကြီး ဖြစ်ကြောင်း စာရေးသူမှ သက်သေထူနိုင်ပါသည်။
ထိုကာလက ကျောက်မြက် ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်သူ ဦးစိုးနိုင် ( အမရပူရ)မှ စာရေးသူအားပြောပြဘူးသော အကြောင်းရာနှင့် ထောက်ပြရသော် ဦးစိုးနိုင်က “မြန်မာပြည်ဟာ တစ်နှစ်ကို ကျောက်စိမ်းတန် ၅၀,၀၀၀ ကျော်ထွက်တယ်။ တန် ၃၀,၀၀၀ ကျော်က အသားတင်ရောင်းစားလို့ရတဲ့ ကျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျောက်တွေအားလုံး နိုင်ငံခြားကို အကုန်ရောက်တယ်။ အဲဒီလိုရောက်တော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကြီးတွေမှာ လူပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီး အလုပ်အကိုင်ရရှိတယ်။ လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီး ချမ်းသာကုန်တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ကျိုးမြို့မှာလည်း ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်က ကျောက်စိမ်းတွေနဲ့ ပေါ့။
မူလပိုင်ရှင် မြန်မာပြည်မှာကျတော့ မန္တလေးမြို့မှာပဲ ထိုက်သင့်သလောက် အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းက တစ်နေ့ကျရင် ပျောက်ကွယ်သွားမှာ
ပါ။ ဥပမာ- မိုင်းရှူးကြည့်ပါ။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်ကြာတော့ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ မိုင်းရှူးနဲ့ ချမ်းသာသွားတာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ ထိုင်းတွေပါ။ မြန်မာလူမျိုး ချမ်းသာ တစ်ဦးစ၊ နှစ်ဦးစရှိမယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ကျောက်စိမ်းက တစ်နှစ်ကို တန်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ထွက်တော့ တစ်လကို တန် ၂,၅၀၀၊ တစ်နေ့ကို ၈၃ တန် ပျမ်းမျှထွက်တယ်။ တစ်တန်မှာ ကီလို ၁,၀၀၀ ရှိတယ်ဆိုတော့ တစ်ကီလိုဆိုရင် ဒီလို (ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်နဲ့ ပန်းပုများကိုထုတ်ပြသလျက်) လက်ကောက်လုပ်လုပ်၊ ပန်းပုလုပ်လုပ် တစ်ကီလိုကို အလုပ်သမား ငါးယောက်လုပ်ရတယ်။ တစ်နေ့ကို ကီလို ၈၃,၀၀၀ ဆိုတော့ ပြည်သူတွေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လူပေါင်း ၄၁၅,၀၀၀ ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပါ” ဟု ဆိုခဲ့လေသည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ မည်သို့မျှပင် ဂရုမထားခဲ့ပါ ။ ထို ၂၀၁၀ ကာလက တွေ့ရှိခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား မိမိ၏လုပ်ကွက်မှ ရရှိပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် ၅၀%၅၀ အကျိုးခံစားခွင့်မူဖြင့် သဘောတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သော် ဘော်လုံးဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်(ခရို)နီမှာ နိုင်ငံတော် နှင့် အကျိုးခံစားခွင့် တန်းတူမရရှိတော့ပဲ ၄၀%၆၀ နုံန်းဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မိသားစုနှင့် သဘောတူ ခဲ့ရပြီး တရုတ်ပြည်ကွမ်းကျိုးမြို့မှာပင် ဟောင်ကောင်မှ ပွဲစားတဦး၏ အဆက်သွယ်ဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၇၂၀)ဖြင့် မြန်မြန်သွက်သွက် ရောင်းခဲ့ကြသည်ဟု ခိုင်လုံသော ကျောက်ဈေးကွက်မှ သိခဲ့ရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရောင်းချပြီးနောက်မှပင် တရုတ်သတင်းစာတစောင်မှ အောက်ပါအတိုင်းမြန်မာပြည်ကျောက်စိမ်းအကြောင်း ရေးထားသည့် သတင်းထွက်ပေါ်လာလေသည်ကို အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားလေ၏။
Myanmar has discoveredaraw jade stone weighing 115 tons at Phakant mining area in the country's northernmost Kachin state, the local Newsweek journal reported Friday.
The jade stone, the second largest one to be mined in the past decade, was excavated by Max Myanmar company, the report said.
ထိုသတင်းစာကပင် တန်ချိန် သုံးထောင် ရှိသော ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအကြောင်းကိုလည်း ကိုးကားဖေါ်ပြထားကြောင်းတွေ့ရှိ၇သည်။
The world's largest jade stone weighing about 3,000 tons was discovered in Phakant in 2000.
The giant jade stone, measuring 21 meters long, 4.8 meters wide and 10.5 meters high was found atadepth of 12 meters underground, an earlier report said.
ထို့အပြင် မြန်မာပြည်တွင် စစ်အစိုးရတို့ ရရှိခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်ကို တိတိပပ ချမပြပဲ ခိုးဝှက်ထားခဲ့သော ကမ္ဘာကြီးမားဆုံးသော ပတ္တမြားအကြောင်းကိုလဲ ထပ်မံ ဖေါ်ထုတ်ထားသည်ကို စာဖတ်သူများ သိသာရန် အောက်တွင် ဖတ်ရှု့ကြည့်နိုင်ကြပါသည်။
The country also claimed that it possesses the world's largest ruby weighing 21,450 carats, the largest star sapphire weighing 63, 000 carats, the biggest peridot weighing 329 carats and the biggest pearl weighing 845 carats.
မြန်မာပြည်အတွင်း ကျောက်မြက်ကောင်းများ ထွက်၇ှိနေသော် ဒေသများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ကြရပါမည်။
There are six mining areas in Myanmar under gem and jade exploration, namely, Mongshu and Namhyar in Shan state, Mogok in Mandalay division, Khamhti in Sagaing division, Moenyin and Phakant in Kachin state.
သို့တင်မက မြန်မာပြည်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလွန်ကြီးမှားသော တန်ဘိုးကြီး ကျောက်မြက်များ ထွက်ရှိကြောင်းကို တရုတ်ပြည်မှ မှတ်တမ်းတင်ထားပုံကိုလည်း စာဖတ်သူတို့ သိစေရန် အောက်တွက် ဖေါ်ပြထားပေးပါသည်။
အဆုံးသတ်ဆိုရသော် မြန်မာအစိုးရ၏ ဖုံးမရ ဖိမရသော အချို့စာရင်းအချက်လက်များအရ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိ ရောင်းချခဲ့သော် ကျောက်မျက်တန်ဘိုး အား ဗဟို စားရင်းအင်း ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှ ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မြက်စုံထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန်သည် ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၀၉ နှစ်လည် ကာလမှာပင် တန်ချိန်ပေါင်း ၃၂၉၂၁ တန် ရှိခဲ့ပြီး ပတ္တမြား နှင့် အခြား တန်ဘိုးကြီး ကျောက်မြက် ကာရက်ပေါင်း ၁၈၇၂၈ မီလီယံ ထွက်ရှိကြောင်း ကျောက်မျက်အမျိုးစားများဖြင့် တင်ပြထားကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
The government's Central Statistical Organization revealed that in the fiscal year 2008-09, Myanmar produced 32,921 tons of jade and 18,728 million carats of gems which include ruby, sapphire, spinel and peridot, as well as 201,081 mommis (754 kilograms) of pearl.
စာရေးသူတင်ပြခဲ့သော အကြောင်းရာများသည် ဖြစ်ရပ်မှန်များဖြစ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများ ခိုးယူရုံတင်မက နိုင်ငံတော် အာဏာ အား ဆက်လက်ချုပ်ကိုင် မောင်နှင်နေသော လမ်းမှားပေါ်တွင် စာဖတ်သူများ လိုက်ပါရောက်ရှိမသွားစေရန်နှင့် တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့် အခြေခံလူမှု အဆောက်အုံများအား ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှ ယခု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်သို့တိုင် ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့်ဆိုင်သော ပတ်သက်သော နိုင်ငံတော် ငွေကြေးများအား ထိထိရောက်ရောက် ပြည်သူများအတွက် အသုံးချပေးကာ တိုင်ပြည်ကြီး အမှန်တကယ် စည်ပင်တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပဲ အကျင့်ပျက်ချစားခြင်းများဖြင့်သာ လက်ရှိ တိုင်းပြည် (မြန်မာပြည်) ဆက်လက်မောင်းနှင်နေသောကြောင့် စာရေးသူမှ
“ ဖွတ်တက်သော တောင်ပို့အတွင်းမှ ခြ ကောင်များ” ဆောင်းပါးအား တင်ပြရခြင်းသာ…………..
ဆက်လက် ဖေါ်ထုတ် တင်ပြပေးပါအုံးမည်
at 5/10/2014 07:13:00 PM
▼ May4- May 11 (39)
စစ်ရေး လျော့ချမှု မရှိ ပါက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အဆိုးဆ...
ဖွတ်တက်သော တောင်ပို့ အတွင်းမှ ခြကောင်များ (အပိုင်း...
ရှမ်းမြောက် KIA တပ်မဟာ (၄)ဒေသတွင် SSA နှင့် အစိုးရ...
လတ်တလော ကချင်ဒေသ ဗမာအစိုးရတပ် လှုပ်ရှားမှု
လွတ်လပ်လို၍ စစ်တိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA ဒုတိယစ...
KIA, တပ်ရင်း (၂၇)ဒေသတွင် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေ
ကချင်ပြည်နယ် မန်စီနှင့် မိုးမောက်မြို့နယ် စာသင်ကျေ...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးရပ်ရေး လမ်းလျှောက် သူ များနှ...
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေ ၂ဝ၁၄ အစီရင်ခံစာ ထုတ်...
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမှု ရခိုင်နဲ့ကချင်မှာ သက်တမ်း...
RCSS/SSA ရုံးကို အစိုးရတပ် ရှောင်တခင်ဝင်ရှာ
အစိုးရ၀န်ထမ်းနှစ်ဦးကို ပြန်မလွှတ် ရင် အင်အားသုံးဖု...
အစိုးရ စစ်တပ် တပ်မ (၈၈)၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် လဂတ...
"အစိုးရဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို မေ ၆ ရက်ညနေ ပြန်မလွှတ်လျှင...
ကချင်စစ်ပွဲများ သန်းခေါင်စာရင်း နှင့်ပတ်သက်ဟု ဦးေ...
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေ မှု ကေအဲန်ယူခေါင...
စစ်တပ်နှင့် KIA လူဖမ်းမှုများ လုပ်လာ
ဦးအောင်မင်းနှင့် KIA မြစ်ကြီးနားတွင် တွေ့မည်
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် လုံခြုံရေး စိုးရိမ်ရဆဲ
“နိုင်ငံရေး နည်းအရ စဉ်းစားမလား၊ တိုက်ပွဲ နည်းနဲ့ စ...
အာဏာရှင် လက်စွဲကျမ်း "တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုသွေးစုပ်...
PUNGLING DINGSA YEN KAU
Pung Ling mare dingsa kaw Myen hte KIA gasat poi b...
စစ်တပ်မှ ငြင်းဆိုသော်လည်း ဒုက္ခသည်တဦး ဖမ်းစီးခံထား...
NCCT နှင့် ဆွေးနွေးရန် ကျန်သည့် ၄၅ ချက် အစိုးရဘက်က...
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ (UNFC) ၏သဘောထား
တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ပစ်ခတ်မှု ဗန်းမောက် ဒေသခံတစ်ဦးေ...
မြန်မာအစိုးရတပ် ဂျက်ဖိုက်တာ KIA တပ်မဟာ(၄)နယ်မြေပေါ်...
MAY 2-3 , 2014 YA LAMAN NA MYEN DAP NI A SHAMU SHA...
ဒုက္ခသည် စခန်းမှ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အမျိုးသား (၁၄)ဦးအား ...
KIA တပ်ရင်း(၃၆) မုန်ဘော် -၀မ်ဆိုင်း တွင် တိုက်ပြွဲ...